‘सुनकेशरी’ पोस्टरमा यी नायिका को हुन्, चिन्नुहुन्छ ? « Ramailo छ
‘सुनकेशरी’ पोस्टरमा यी नायिका को हुन्, चिन्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति : Oct 30, 2017
समय : 4:46 pm
नायिका ऋचा शर्मा अभिनित फिल्म ‘सुनकेशरी’ को पहिलो झलक सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक फिल्मको पहिलो पोस्टरमा नायिका शर्माको डरलाग्दो रुपलाई देख्न सकिन्छ । ‘को आफ्नो’ पछि ‘सुनकेशरी’मा ऋचा यस प्रकारको फरक भूमिका गरेकी हुन् ।
अर्पण थापा निर्देशित सुनकेशरीको सबै छायाँकन अष्टे्रलियामा गरिएको छ । भीम न्यौपानेसँग सहकार्य गरेर ऋचाले ‘सुनकेशरी’ निर्माण गरेकी हुन् । यस अघि फिल्म निर्देशक थापासँग मिलेर ऋचाले ‘आधा लभ’ निर्माण गरेकी थिइन् । ‘सुनकेशरी’ लाई सन् २०१८ को अप्रिलमा रिलिज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।